Tue, Jan 21, 2020 at 3:25pm
एमसीसीे संसदबाट अनुमोद हुन्छ : मन्त्री ढकाल #आहा खबर# दीपक मनाङेद्वारा एन्फा कास्कीका अध्यक्ष गुरुङमाथि हातपात #आहा खबर# नेपाल–चीन सम्बन्ध सुढृढ बन्दै गएको छ : गृहमन्त्री थापा #आहा खबर# घुस लिएको अभियोगमा मुद्दा #आहा खबर# आर्थिक ‘हब’ का रुपमा विकास हुँदै नेपालगञ्ज #आहा खबर# धादिङ दुर्घटना, ६ जनाको मृत्यु #आहा खबर# आहा ! २५ रुपिँया मै एक छाक खाना !! #आहा खबर# निर्माण उपकरण जलाउने समूह नियन्त्रण गरिने : गृहमन्त्री थापा #आहा खबर# झिनो अङ्कले बढ्यो नेप्से #आहा खबर# भ्रष्टाचारको अभियोगमा इन्टरपोलका पूर्व प्रमुखलाई साढे १३ वर्ष कैद #आहा खबर# भारतसँगका थाती विषय टुङ्गो लगाउने समय आएको छ : प्रम #आहा खबर# मेलम्चीको मुहानसम्मको सडक निर्माण शुरु #आहा खबर# कांग्रेसमा चर्कदो विवाद : अनामनगरमा रामचन्द्रको छुट्टै कार्यालय #आहा खबर# हिटरको प्रयोगमा अपनाउनुपर्छ सावधानी, नत्र ज्यान जानसक्छ #आहा खबर# हिटर बालेर सुतेका आठ भारतीय पर्यटकको मृत्यु #आहा खबर#
काठमाडौं - मानिस राेगी बन्नुकाे मुख्य कारण खानपिनमा ध्यान नदिनु हाे । खानपिनकाे लापरवाहिकै करणले मानिसमा धेरै किसिमका राेगहरु लागेका हुन्छन् ।
मासु धेरै खानु पिन मानिसका लागि हानिकारक छ । अत्याधिक मात्रामा मासुको सेवनले विभिन्न खालका रोगहरु लाग्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् । त्यसमा पनि रातो मासुको प्रयोग नगर्न चिकित्सकहरु सल्लाह दिन्छन् ।
मासु र चिल्लो पदार्थको बढी सेवन गर्ने मांसहारीलाई मुटुको जोखिम बढी हुने बताइने गरिएको छ । माछामासुरहित आहार गर्दा मुटुको रोग लाग्ने सम्भावना कम हुने भए पनि मस्तिष्काघातको जोखिम बढ्ने एउटा अध्ययनले देखाएको बीबीसीले जनाएको छ ।
ब्रिटिश मेडिकल जर्नलमा प्रकाशित अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले गरेको अध्ययनमा ४८ हजार व्यक्तिलाई १८ वर्षसम्म हेरिएको थियो । प्रत्येक हजार मानिसहमध्ये मुटुको रोग लाग्ने शाकाहारीको सङ्ख्या मांसाहारीको भन्दा १० कम थियो । तर मस्तिष्काघात हुनेमध्ये शाकाहारीको सङ्ख्या तीन जनाले बढी थियो ।
सन् १९९३ देखि २००१ देखि अध्ययनमा सहभागी भएका आधा मानिस मांसाहारी थिए भने १६ हजार शाकाहारी तथा ७५ सय जना माछा मात्रै खाने थिए ।
अध्ययनमा सहभागी हुने बेलामा उनीहरूलाई आफ्नो आहारबारे सोधिएको थियो। सन् २०१० मा फेरि त्यही कुरा सोधियो ।
उनीहरूको स्वास्थ्यस्थिति, धूमपान गर्ने बानी तथा शारीरिक व्यायाम गर्ने वा नगर्ने पक्षलाई पनि अध्ययनमा समावेश गरिएको थियो । तीमध्ये जम्मा दुई हजार आठ सय २० जनालाई हृदयरोग लागेको थियो भने एक हजार ७२ जनालाई मस्तिष्काघात भएको थियो ।
माछा मात्रै खाने मानिसमा हृदयरोगको जोखिम १३ प्रतिशत कम र शाकाहारीमा २२ प्रतिशत कम देखिएको छ । तर शाकाहारीहरूमा मस्तिष्काघातको सम्भावना २० प्रतिशत बढी देखिएको छ ।
शाकाहारीमा भिटामिन बी १२ को कमी हुने भएकाले त्यसो भएको हुन सक्ने तर थप अध्ययन चाहिने बताइएको छ । आहार विशेषज्ञहरूका अनुसार शाकाहार वा मांसाहार जे गरे पनि धेरै प्रकारका खानेकुरा खानु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुन् ।